इन्टरनेट बैंकिङ कि मोबाइल बैंकिङ ?
लण्डन । समयको गति पनि कस्तो ? पच्छ्याउदा, पच्छ्याउदै हामी कतिबेला छुट्छौं थाहै हुन्न । आज हामी जुन गतिमा छौं । भोलि त्यही गतिले नपुग्न सक्छ । अर्थात हामी गतिमै हुँदाहुँदै छुट्न सक्छौं । हो, प्रविधिले यति छिट्टै फड्को मारि रहेको छ कि हामी गतिमै हुँदा पनि छुट्छौं । यो समयको अर्को सत्य यो पनि हो । तर, हामी छुट्नु हुन्न ।
प्रविधिको विकासले धेरै जसो सेवा प्रदायक कम्पनी इन्टरनेटमा निर्भर हुँदै छन् । हेर्नुस् त हिजो महिनौं पछि एक ठाउँदेखि अर्को कुना पुग्ने खबर आज छिनभरमै पुग्छ । बैंकमा घण्टौं खर्चेर गर्नुपर्ने आर्थिक कारोबार मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङबाट एकै छिनमा फत्ते हुन्छ । यस्ता धेरै झन्झटिला कामहरु प्रविधिले निकै सजिलो बनाइ दिएको छ ।
अहिले हामीलाई एकठाउँबाट अर्को स्थानमा पैसा पठाउन जति सहज बनाएको छ । यो सहजतालाई अझै सहज बनाउन ‘मनि टु’ ले थप भूमिका खेलेको छ ।
तपाईको मेहनत को कमाईलाई सहि मुल्यांकन गर्दै बेलायत बाट मनिटु लिमिटेड ले नेपालको लागि रेमिटेन्स सेवा को शुरुवात गरेको छ । जस अन्तर्गत तपाईले मनिटु को एप अथवा वेबसाइट https://bit.ly/3r8SYv0 प्रयोग गरी उत्कृष्ट विनिमय दर सहित छिटो र सुरक्षित तरिका ले नेपाल मा पैसा पठाउन सक्नु हुन्छ। पैसा पठाउदा कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।
कुरा गरौ मोबाइल बैंकिङको
हामी धेरेलै पैसा पठाउन मोबाइल बैंकिङको प्रयोग गछौं । आफ्नो स्मार्टफोनमा भएको एप प्रयोग गरेर कति सजिलै आफ्नो परिवारलाई परदेशमा रहेर पैसा पठाउन सक्छौं । चाहिएको सामानको पैसा स्क्यान गरेर तिर्न सक्छौं । टेलिफोन, बिजुली बत्तिको बिल तिर्न सम्बन्धित संस्थाको अफिस धाउनु परेको छैन । हेर्नुस् त कति सहज ।
तर, प्रविधिले हामीलाई सजिलो त बनाइदियो । सजिलो सँगसँगै चुनौती पनि उत्तिकै बढाई दिएको छ । प्रविधिको प्रयोगसँगै हाम्रो व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षीत राख्नुपर्ने चुनौति पनि उत्तिकै छ । यहाँ त्यसैको बारे चर्चा हुन्छ ।
हामीले प्रयोग गर्नेे मोबाइल बैंकिङभन्दा अनलाइन बैंकिङ थप सहज र भरपर्दो हुन्छ । तपाईँको व्यक्तिगत जानकारीका लागि पनि अनलाइन बैंकिङबाट पैसा पठाउन सबैभन्दा सुरक्षित हो । किनभने पैसा पठाउँदा हाम्रो व्यक्तिगत जानकारी र रकम एक बैंकबाट अर्को बैंकमा सिधै जान्छ । अनलाइन बैकिङमा भने कुनै तेस्रो–पक्षको सेवा हुँदैन । जसले तपाइँको जानकारीलाई सम्हाल्छ । तपाईंलाई केवल बैंक खाताको साथ प्राप्त कर्ताहरूलाई पैसा पठाउने अनुमति मात्रै छ । जसले यो सुनिश्चित गर्छ कि अन्य व्यक्तिको पहिचान प्रमाणित भयो । अनलाइन बैंकिंङ मार्फत बैंक खाताबाट पैसा स्थानान्तरण गर्नु सामान्यतया छिटो, स्वतन्त्र र सुरक्षित छ ।
मोबाइल बैकिंङ प्रयोग गरेका धेरैलाई मोबाइल मार्फत कारोबार गर्न सहज हुन सक्ला । सुन्दा तपाईँलाई पत्यार नलाग्न पनि सक्छ । तर, मोबाइल बैंकिङ भन्दा अनलाइन कारोबार सुरक्षित र सहज छ । अनलाइन र मोबाइल बैंकिंङमा धेरै समानता छन् । तर त्यहाँ केही भिन्नताहरू छन् । बैंकिङ टेक्नोलोजीले ग्राहकहरूको सेवामा रहनु पर्छ जसको जीवन बढ्दो माग गर्दैछ ।
अनलाइन बैंकिङले लेनदेनलाई जनाउँछ जुन सामान्यतया एक नीजि प्रोफाइल अन्तर्गत एक बैंकको वेबसाइट र एक डेस्कटप वा ल्यापटप कम्प्युटरबाट , इन्टरनेट मार्फत चलाउन सकिन्छ । यी लेनदेनहरूमा परम्परागत रूपमा स्थानीय शाखामा प्रस्ताव राखिएका सेवाहरू एकमा जानु पर्छ । अनलाइन बैंकिङ लेनदेन सामान्यतया यस्ता सुविधाहरू भएको रूपमा परिभाषित छ । जुन यहाँ प्रस्तुत छः
यसमा पनि मोबाइल बैकिङ जसरी वित्तीय लेनदेनको एक बैंक को सुरक्षित वेबसाइट को माध्यम बाट इन्टरनेटमा आयोजित गरिन्छ । बैंकसँग शारीरिक शाखा स्थानहरू हुन सक्छन् वा यो केवल अनलाइन अवस्थित हुन सक्छ ।
वित्तिय लेनदेनका कुरा आउन साथ अनलाइन बैंकिंङ सुविधा र नियन्त्रणको बारेमा हुन्छ । अनलाइन बैंकिङ कुनै पनि समय जोसुकैलाई पनि आफ्नो डाटा र अन्य बैंक सम्बन्धित सेवाहरू पहुँच गर्न चाहने जो कोहीका लागि उपयुक्त छ । मोबाइल उपकरणहरू, ट्याब्लेटहरू र मानक डेस्कटपहरू बीच तपाईं आफ्नो शर्तहरूमा तपाईंको बैंकिङ आवश्यकताहरू सञ्चालन गर्न सक्नुहुनेछ ।
हाम्रो डिजिटल प्लेटफर्म, इबैंकिङ, तपाईंलाई सजिलैसँग आफ्नो ब्यालेन्स जाँच गर्न, ट्रान्सफर गर्न र बिलहरू भुक्तान गर्ने अनुमति त दिन्छ तर झन्झटिलो रुपमा । तर अनलाइन बैकिङले यी उत्साहजनक सुविधाहरू दिन्छ । जुन यस्ता छन् ः
सतर्कता र सूचनाहरूः लेनदेन र सन्तुलन सतर्कताहरूको साथ थाहा पाउनुहोस् ।
बाह्य स्थानान्तरणः सजिलैसँग अन्य व्यक्तिको साथ पैसा हस्तान्तरण गर्नुहोस् वा अन्य वित्तीय संस्थामा तपाईंको खाताहरू बिच ।
अनलाइन खाताः कहिबाट पनि मिनेटमा नयाँ खाता खोल्नुहोस्।
पैसा व्यवस्थापनः एक ठाउँमा तपाईंको सबै वित्तीय सम्बन्ध ट्रयाक गर्नुहोस् ।
मोबाइल चेक निक्षेपः एक शाखा भ्रमण नगरी चेक जमा गर्नुहोस् ।
द्रुत ब्यालेन्स विजेटः तपाईंको मोबाइल उपकरणमा तपाईंको होम स्क्रिन वा सूचना केन्द्रबाट तपाईंको खाता ब्यालेन्स द्रुत रूपमा हेर्नुहोस् ।
मोबाइल बैकिङमा तपाईँले माथि उल्लेखित केही सुविधा प्राप्त गर्नसक्नु हुन्छ । तर, अनलाइन बैकिङ जस्तो सेवा सुविधा प्राप्त गर्नसक्नु हुन्न । अझ तपाईँले ‘मनि टु’ मार्फत अनलाइन बैकिङ प्रयोग गर्नुभयो भने त टेक्नोलोजिको प्रतिस्पर्धामा एक उत्कृष्ट माध्यम हुन सक्छ ।